သာလွန်ဇောင်းထက်| February 22, 2013 | Hits:32,911
ထိုင်းနိုင်ငံမှ မူးယစ်ကျေးကျွန် မြန်မာလှေသမားတို့ ဘ၀ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံနိုင်ဟု ဦးသိန်းစိန်ပြောဒီတကြိမ်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD မှားပြန်ပြီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံအမေရိကန် ဒဏ်ခတ်သူများ စာရင်းက ဘယ်သူတွေ လွတ်ကြမလဲ
nonowaynever February 22, 2013 - 5:44 pm we already decided.no noway never.
Reply kyaw tunn February 22, 2013 - 6:50 pm daw su is water follow fish follow… she is in the group of burmese junta … we dont know how thein sein seduce her and obama ??//:(
Reply kyaw naing soe February 22, 2013 - 9:12 pm 1982 ဥပဒေကိုမပြင်ဘဲနိုင်ငံတကာစံမှီပါ့မလား?
Reply ​ရော​သ​မ​မွေ February 22, 2013 - 9:44 pm ” တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မဖြစ်မှုဆိုတာ ဒီနိုင်ငံကပဲ ဆုံးဖြတ်ရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်တော့ မီရမှာပေါ့”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုသည်။”
Reply swe htwe February 22, 2013 - 10:33 pm We admire you ,Daw Su. But we don’t agree to you on that point. It is our national security. We think OIC countries should accept them to live in their countries if they really have goodwill. It isawin-win situation and we will be very grateful. Long live myanmar !!!
Reply Bagothar February 23, 2013 - 7:38 pm Brother.She said ,Myanmar(coutry/people)only can decide they (bingali)can be citizen of Myanmar or not.That mean=non of other countries(people) business.Please read again and you can be understand what her mean.
Reply ဗမာ February 24, 2013 - 12:28 pm Totally agree with you!!!
Reply ကိုတရုတ် February 22, 2013 - 10:59 pm ဘယ်သူတွေနိုင်ငံသားဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာမှတ်ပုံတင်လုပ်မှပိုသိလာရပါတယ်။
Reply Nay Toe February 23, 2013 - 2:03 am No matter what they say or what we hear, useless military dictatorship(Ne Win and Than Shwe) was the blame for illegal immigration. I hope Than Shwe does not die before facing prosecution. Ne Win was gone without humiliated by the people he made their lives miserable. Long live Than Shwe to face humiliation.
Reply လူလေး February 24, 2013 - 10:58 am စင်္ကာပူ ဆိုလဲ ခိုးဝင်ရင် ကြိမ်ဒဏ် အမေရိကန်ဆိုလဲ တရားမဝင် ၁၁သန်းရှိတယ်။ ထိုင်းမှာ မြန်မာ ၄သန်း နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး။ဘယ်သူမှ ဇောတက မတက်ဘူး။ ကြိမ်ဒဏ်ပေးတာ နိုင်ငံတကာစံလား။ အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ လူတွေ အန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့ ကျနော်တို့လဲ အဲလို စဉ်းစားသင့်တယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ လဘ်စားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တိုးတက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျနော် ပြောချင်တာက ၁၉၈၂ ဥပဒေ နဲ့ နိုင်ငံသားပေးလိုက် လောလောလတ်လတ် ခိုးဝင်လာတဲ့ လူတွေ မောင်းထုတ်လိုက်။ ဘယ်သူ့မှ သနားစရာမလိုဘူး။ ထိုင်းက ကျနော်တို့ မြန်မာ တွေလဲ မြန်မာ အစိုးရလက်ခံသည်ဖြစ်စေ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ နယ်စပ်တံတားမှာသွားသွန်(သွားပို့) တာပဲ။ အဲလိုမှ မလုပ်ရင် ဒေသခံရခိုင်တွေ ကို လျစ်လျူရှု ရာ၊ မကာကွယ်ရာကျမယ်။ ပြီးတော့ လက်ရှိ လဝက ဝန်ကြီး ခင်ရီကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ ရခိုင်ဝန်ကြီး တစ်ယောက်ခန့်လိုက်ပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကို ရခိုင်တစ်ယောက်ကိုင်တွယ်တာ သဘာဝပိုကျမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော် ရခိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ ရခိုင်နယ်မြေလုံခြုံရေး ရခိုင်တွေ ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်ထင်လို့ပါ။လဝကနဲ့နယ်ကြားစောင့်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး အသစ်ပြန်ဖွဲ့ပါ မန်းလေးမှာလဲ တရုတ်တွေ ရခိုင်မှာလဲ တရားမဝင်ဘင်္ဂါလီတွေ ဒါဒင်းတို့လတ်စားလို့ ဖြစ်ရတာ။ ဒေါ်စုမကလို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသား အကျိုးစီးပွား ကိုအရင်ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အရင်ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအကြိုက်လိုက်ပြောနေရအောင် ကုလသမ္မဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်မို့လို့လား။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသွေဖီရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မထောက်ခံသင့်ကြောင်းတင်ပြချင်ပါတယ်။
Reply ဗမာ February 24, 2013 - 3:54 pm မှန်ကန်ပါတယ်။ လဝကနဲ့နယ်ကြားစောင့်တပ်က လာဘ်စားတဲ့သူတွေအကုန်ဖြုတ်ပစ်ပြီးရခိုင့်မြေ ရခိုင်ကာကွယ်ပါစေ။ မြန်မာအစိုးရက ကြီးကြပ်ပြီး၊စောင့်ကြည့်ယုံပဲနေပါ။ ၀င်မရှုပ်ပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ဝင်ရှုပ်လေ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဘင်္ဂါလီတွေတိုးပွားလာလေ၊ ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပိုပိုပြီးချမ်းသာလာလေပဲ။ ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာဖို့တခုအတွက်နဲ့တော့ တိုင်ပြည်နဲ့ဘာသာကို မရောင်းစားကြပါနဲ့။ ရခိုင်လူမျိုးတွေလည်းနစ်နာလှပါပြီ။ ကျွန်တော်က ဗမာတယောက်ပါ။
Reply Min Naing Tun February 24, 2013 - 2:01 pm i don’t like Daw Suu Kyi’s comment. i don’t think she should be myanmar citizen.
Reply sukena February 24, 2013 - 11:56 pm To/ daw su
Reply soe win February 26, 2013 - 9:50 am hi
Reply win then February 26, 2013 - 10:12 am daw su just says blah blah to make pleased for usa … it is clear that she is doing just for burmese people .. not different from burmese junta than shwe and thein seine…. burmese people still think she is heroic …. now she and nld are same side with junta … brumese people no hope Reply တခြားဖတ်စရာများ